Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Samui na Phuket ugbu a ọzọ na Bangkok Airways
Airlines • Aviation • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Bangkok Airways Public Company Limited bụ ụlọ ọrụ mpaghara dabere na Bangkok, Thailand. Ọ na -arụ ọrụ ndokwa maka njem na Thailand, Cambodia, China, Hong Kong, India, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Singapore, na Vietnam. Ebe bụ isi ya bụ ọdụ ụgbọ elu Suvarnabhumi
Bangkok Airways mara ọkwa ịmaliteghachi Samui - Phuket (vv)
Site na 25 Ọgọst 2021 gaa n'ihu, Bangkok Airways Public Company Limited ga -amalite ọrụ ya ozugbo n'etiti Samui na Phuket.
Bangkok Airways na-amaliteghachi ọrụ a iji mee ka ndị njem dị mfe yana ịkwado ọrụ mmeghe nke Thailand nke bụ Phuket Sandbox na Samui Plus Model.
A ga-eji ụgbọ elu ATR72-600 rụọ ọrụ maliteghachi n'etiti Samui na Phuket, malite na ụgbọ elu atọ kwa izu (Mọnde, Wenezde na Fraịde). Ụgbọ elu PG253 na -apụ n'ọdụ ụgbọ elu Samui na 11.25hrs. wee rute n'ọdụ ụgbọ elu Phuket na 12.25hrs. Ụgbọ elu PG254 na -abata n'ọdụ ụgbọ elu Phuket na 13.00h. wee rute n'ọdụ ụgbọ elu Samui n'elekere 14.00.
A chọrọ ka ndị njem na-aga ma si obodo abụọ ahụ weta asambodo ahụike yana nsonaazụ ụlọ nyocha na-egosi na achọpụtaghị COVID-19 (nke usoro RT-PCR mere ma nye ya ihe karịrị awa 72 tupu ime njem) yana ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Na mgbakwunye, a na -achọkwa ndị njem ịgbaso ntuziaka nke ụlọ ọrụ mpaghara Phuket na ọfịs mpaghara Surat Thani nyere, enwere ike lelee ozi gbasara ihe achọrọ na https://www.gophuget.com na https://healthpass.smartsamui.com
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ụgbọ elu kwesịrị ịgbatị nkwụsị nwa oge nke ọrụ nri ụgbọ elu yana imechi ebe ndị njem ya ruo oge amara ọzọ.